Liiska musharixiinta beelaha waqooyi ee maanta u tartameeysa doorashada Aqalka hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Liiska musharixiinta beelaha waqooyi ee maanta u tartameeysa doorashada Aqalka hoose
Waxaa maanta markale xarunta gaadiidka ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho dib uga bilaabanaya doorashada xildhibaanada Aqalka hoose ee beelaha gobolada waqooyi ee Somaliland, kadib markii muddo maalmo ah la hakiyay khilaaf jiray awgeed.
Kulan waqti badan qaatay oo ay si wadajir ah u yeesheen guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo kan Somaliland ayaa ugu dambeyn la isku raacay in maanta oo Isniin ah dib loo bilaabo doorashada. si aysan howlaha dib u dhac kale ugu imaanin.
Ilaa 20 xildhibaan ayaa ilaa iyo haatan la doortay xildhibaanada cusub ee beelaha gobolada waqooyi u matalaya Aqalka hoose, inkastoo guddiga doorashooyinka ay laaleen qaar ka mid ah xildhibaanadaasi.
Tirada weli harsan ayaa gaaraya 26 xildhibaan, waxayna wadarta guud noqonayaan 46 xildhibaan oo Aqalka hoose u matali doona beelaha dega gobolada waqooyi ee Somaliland.
Dhinaca kale, doorashada maanta waxaa lagu tartami doonnaa ilaa lix kursi oo labo ka mid ah ay si gaar ah ugu tartamayaan haween kaliya, waxaana saacadaha soo socdo la filayaa in si toos ah ay doorashadu u bilaabato.
Hoos ka aqriso magacyada iyo beelaha ay kasoo jeedaan musharixiinta maanta tartamaysa